अझै पुरा गरेकी छैनन् रचनाले आमाबुवाको सपना, यस्तो छ कारण ! हेर्नुहोस्(भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
January 7, 2021 AdminLeaveaComment on अझै पुरा गरेकी छैनन् रचनाले आमाबुवाको सपना, यस्तो छ कारण ! हेर्नुहोस्(भिडियो सहित)
पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा आएको नाम हो रचना रिमाल, पूर्वको झापामा जन्मिएकि उनि अहिले आफ्नो गायकीबाट धेरै दर्शकको मन मस्तिस्कमा बस्न सफल भईसकेकी छन । नेपाल आइडल सिजन-३ बाट आफ्नो गायन यात्रा सुरु गरेकी उनले अहिले सम्म करिब दर्जनौ गितहरु गाइसकेकी छिन भने धेरै गितहरु हिट छन् ।
नेपाल आइडलको उत्कृष्ट ८ सम्मको यात्रा गर्न सफल भएकी उनि विश्वभर कोरोना महामारिको समयमा पनि गित रेकर्ड गराउन ब्यस्त नै थिइन । धेरैलाई लकडाउनले प्रभाब परेतापनि उनलाई भने लकडाउनाले नै थप उचाइमा पुग्न मद्दत गर्यो भन्दा फरक नपर्ला । आफ्नो बाहेक अरु कसैको म्युजिक भिडियोमा अफर गर्यो भने के गर्नु हुन्छ ? भन्ने प्रस्नमा उनले यस्तो जवाफ फर्काईन । हेर्नुस् भिडियो कुराकानी ।
गित रेकर्ड गराउनमै ब्यस्त उनि स्कुल लाइफमा आफु धेरै छुचि रहेको हामी संगको भिडियो कुराकानीमा बताइन । आफ्नो गायनबाट नै बुबाआमाको सपना पुरा गर्ने बताउने उनका सामाजिक संजाल फेसबुक तथा टिकटकमा पनि उतिकै फ्यान फलोअर्स छन् । यस्तै, उनले विभिन्न अन्तरबार्ताहरुमा आफ्नो आमाबुबाको सपना पूरा गर्ने बताएकी थिइन् । जस्को ताजा अप्डेट प्रस्तुत भिडियो कुराकानीमा बताएकी छन् भने यतिधेरै चर्चा हुनु भन्दा पहिले आफू मायाको चिनो र खदाको निकै भोगी रहेको समेत सुनाइन् ।